भिडियो संवादमा सरोकारवाला जोड्दै पत्रकार बिजय - Bibechana Bibechana
२८ चैत्र २०७६ १४:२० ||
पत्रकार बिजय बराल
बिर्तामोड– लक डाउनका बेला को के गर्दै छन् ? अझ सार्वजनिक जिम्मेवारी र दायित्वमा रहेकाहरुले निर्वाह गरिरहेको भूमिका कत्तिको प्रभावकारी छ ? यस विषयमा जनताको चासो हुनु स्वभाविक हो । यो जनचासो मेटाउन अग्रसर भएर लागेका छन् झापाका पत्रकार बिजय बराल । यसका लागि उनले घरमा बसेर सरोकारवालासँग ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ गरिरहेका छन् ।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत सधैँ नयाँ काम गर्न रुचाउने पत्रकार बरालले लक डाउनका बेला नयाँ आइडिया लगाए । ‘सबै मानिस बाहिर के भइरहेको भन्नेमा अनविज्ञ छन्’, पत्रकार बरालले भने, ‘त्यसैले सरोकार राख्नेलाई सिधैँ भिडियो कन्फ्रेन्समा जोड्ने गरेको छु ।’ स्थानीय तहले कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियान कसरी चलाइरहेका छन् भन्ने लागेर प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ सुरु गरेको पत्रकार बराल बताउँछन् ।
लामो समय फोटोग्रापी पेशामा बिताएका उनी प्राइम टेलिभजनका झापा संवाददाता पनि हुन् । फेसवुकमा अन्य प्रविधिलाई लिंक गराउँदै जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग जवाफ पत्रकार बरालले हरेकदिन सरोकारवालासँग छलफल गर्छन् । जुम सफ्टवेरको माध्यमबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई उनले जोडिरहेका छन् । इन्टरनेटको पहुँचमा भएका नागरिक यसमा जोडिन सक्छन् । संवाद हेर्न र सुन्न सक्छन् । प्रत्यक्ष प्रशारणको समयमा आउने कमेन्टको जवाफ पनि त्यही बेला खोज्ने जमर्काे पत्रकार बरालले गर्दै आएका छन् ।